News - Wax dabiici ah oo saafi ah
1. Dhar linen ah
Gogosha dharka, looma baahna in la sheego, ayaa ah ku-diyaarinta dharka xagaaga. Waxay u oggolaaneysaa maqaarka inuu neefsado, laakiin sidoo kale neefsasho badan kuma siineyso dhidid cufan, dhibaato koronto oo aan taagnayn, sidoo kale u jilicsan taabashada, dadka xasaasiyadda leh ayaa si gaar ah saaxiibtinimo leh. Intaa waxaa dheer, dharka laftiisu aad ayuu qaali u yahay oo wuxuu leeyahay tayo sare, taas oo ka dhigaysa mid aad u raaxo badan in la xirto xagaaga.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka dharka linenka ah ayaa ah inay u janjeerto duuduubku. Haddii aad xidhato dhar rasmi ah oo ka samaysan maro wanaagsan, xitaa haddii birta subaxdii la xidho, way duuduubmi doontaa markaad u tagto shirka shirkadda duhurkii.
Waan ka fiirsan karaa cudbi iyo hemp maro isku qasan, fiiro gaar ah u yeelo waxa ku jira hemp ka hooseeya cudbiga, sida 60 cudbi + 30 hemp. Maaddadani waxay leedahay khiyaanooyin waaweyn, sidaa darteed uma muuqato mid jilicsan sida jilbaha yaryar, laakiin waxay ku dareysaa qaab-dhismeed. Waad ku ridi kartaa qolkaaga ka dib markaad nadiifiso, si ka duwan linen saafi ah, oo u baahan kaawil.
Dharka xarka ah ee dhabta ah
Dharka xariirta saafiga ah waa cirfiid gaar ah waa qurux gaar ah, sikastaba ha ahaatee dulqaadashada xariirta saafiga ah ma koraan, maxaa yeelay waxay leeyihiin jaalle, soo jiid dhibaatada xariirta si ay u soo saaraan, waxay rabaan inay iibsadaan inay ku soo noqdaan si ay u xirtaan ereygii hore waqtiyada caadiga ah si ay u qaataan qaas daryeelka nadiifinta. Ma ahan wax aad u fudud in la hayo, laakiin maadaama ay tahay sibiibix ah oo qabow xagaaga, haween badan ayaa iibsada.
Ogaanshaha astaamaha ay leedahay, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato dhibaatada, waa xariir iyo gogol fudud sida u duuduubka! Qeybta xariirka saafiga ah sidoo kale waa mid qaas ah, waxay leeyihiin xariir, xariir Jabbaan ah, xariir Faransiis cayn kasta leh, dhexdooda waxaa ku yaal laba xariir waa iska fududahay in la sameeyo.
Sida crepe-ga culus ee loo yaqaan 'DE Chine', wuxuu ku badan yahay xariirta, dusha sare wuxuu u eg yahay muuqaal muuqda, oo loo isticmaalo sameynta dharka, mana sahlana in la laabo, way fududahay in suuqa laga iibsado.
Waxa kale oo jira nooc ka mid ah satin fidsan, maxaa yeelay ku dar wax ka yar 10 spandex, markaa noqo xariir jilicsan, oo badanaa loo isticmaalo shaatiyada, lidka aan la loodin karin ee lidka-lidka ayaa sidoo kale si gaar ah u wanaagsan in la ilaaliyo, uma baahnid inaad ka walwasho cimri dherer.
Dharka cudbiga ah wuxuu leeyahay saamaynta dhuuqista dhididka, laakiin sidoo kale wuxuu si wax ku ool ah uga hortagi karaa urka dhididka, xirashada jirka ma dhidido doono maqaarka ayaa kori doona finanka cas. Ku dhaq ilaa mashiinka dharka lagu tuuro, ku dhaq dharka wanaagsan oo qallalan, fiiro gaar ah ha u yeelan sida.